Nepal Auto | अनि नाम राखियो : मोटरसाइकल हस्पिटल
अनि नाम राखियो : मोटरसाइकल हस्पिटल 11 Ashad, 2076
काठमाडौं पेप्सीकोला चोकको महादेव मन्दिरदेखि टाउन प्लानिङ छिर्ने मूख्य सडक अर्थात मूलपानी जाने सडकमा २ सय मिटर भित्र बाइक बनाउने एक वर्कसप छ । त्यसको माथितिर झुन्ड्याइएको साइनबोर्डमा लेखिएको छ – मोटरसाइकल हस्पिटल ।
हस्पिटल अर्थात नेपाली भाषामा भन्दा अस्पतालको अर्थ धेरैलाई थाहा छ । विरामीहरुको उपचार गरिने स्थान नै हस्पिटल हो । मोटरसाइकलको उपचार अर्थात मर्मत गरिने भएकोले सो वर्कसपको नाम पनि मोटरसाइकल हस्पिटल राखिएको हो ।
मोटरसाइकल हस्पिटलमा सधै हँसिलो मुद्रामा भेटिने गर्छन् प्रदीपबहादुर केसी । उनले विरामी मोटरसाइकलको उपचार गर्छन् । उनले यसरी उपचार गर्न थालेको करिब १८ वर्ष जति भयो । भन्छन्, ‘बुलेट वाहेक प्रायः सबै बाइक मर्मत गर्छु ।’
मोटरसाइकल हस्पिटल चलाउने हुनाले उनलाई धेरैले ‘डाक्टर साप’ भनेरै चिन्छन् । उनी यो क्षेत्रमै डाक्टर सापको नामले लोकप्रिय छन् ।
मेकानिक्स पेशाको शुरुवात भने प्रदीपले काठमाडौंकै सुविधानगरस्थित जनकपुर मोटरसाइकल वर्कसपबाट गरेका थिए । करिब ५ वर्ष जति सो वर्कसप सञ्चालन गरेपछि उनले पेप्सीकोलामा वर्कसप सार्ने योजना बनाए । तर नाम पनि नयाँ जुराउने विचार आयो । तर के राख्ने त ? साथीहरुका बीच सल्लाह भयो । उनका धेरै साथीहरु कलाकार छन् । कलाकार साथीहरुकै बीचमा कलाकार शिशिर सुवेदीले फ्याट्ट भनिदिए – मोटरसाइकल हस्पिटल । सबैको सहमति भयो । अनि नाम राखियो – मोटरसाइकल हस्पिटल ।
अहिले यो नामका कारण पनि उनको वर्कसप ‘युनिक’ छ । ५८ सालमा सुविधानगरमा साथीहरुसँग मिलेर वर्कसप खोलेपछि करिब ५ वर्षपछि ६३ सालमा उनी पेप्सीकोला सरेका थिए । हाल उनको व्यवसाय राम्रो चलिरहेको छ । उनी वर्कसपमा एक्लै काम गरिरहेका हुन्छन् । काम भ्याइनभ्याई छ । काम गर्ने मेकानिक्स खोजेर पनि पाइदैन । काम पाइदैन भन्नेहरुका बीचमा उनी भन्छन्, ‘खोई त, म काम गर्ने मान्छे खोजिरहेको छु । दक्ष मान्छे पाउनै अप्ठ्यारो छ ।’
हुन पनि हो, नेपालको सबै स्थानका वर्कसपमा काम गर्नका लागि दक्ष मेकानिक्सहरुको खाँचो छ । उनले स्नातक सम्मको अध्ययन गरेका छन् । गाडी मोटरसाइकलको वारेमा धेरै चासो भएको कारणले उनले जनकपुरमा अध्ययन गर्दै गर्दा ६ महिनाको सीप विकास तालिम लिएका थिए । त्यही तालिम नै उनको पेशाको आधार बन्यो । बीच बीचमा मोटरसाइकल कम्पनी, लुब्रिकेन्ट कम्पनी र पार्ट्स कम्पनीहरुले पनि तालिम प्रदान गरिरहन्छन् । यसबाट उनको ज्ञानको क्षेत्र फराकिलो बन्दै गएको छ ।
शुरुमा उनले ८, ९ कक्षा पढ्दा देखि नै पम्प सेटहरु बनाउने गर्थे । प्राविधिक क्षेत्रको उनको कार्य यहीबाट प्रारम्भ भएको थियो । सिराहाको सुखीपुर नगरपालिकामा उनको पुख्र्यौली घर हो । हाल वडा नम्बर ६ मा पर्छ । टोलको नाम बडहरी हो । सानो छँदा घरमै मिस्त्रीहरु आउने जाने गर्थे । उनीहरुसँग सिकेर पछि उनले आफै नै पम्प सेट बनाउन थालेका थिए ।
उनले जनकपुरमा अध्ययन गरेर प्रमाणपत्र तह पुरा गरे । ब्याचलर गर्दै गर्दा विवाह गरे । त्यही समयमा विवाह र तालिम सम्पन्न भयो । त्यसपछि उनले काठमाडौंमा प्रेसमा काम गरे । एक दुई वर्ष पछि मोटरसाइकल वर्कसप शुरुवात गरेका थिए ।
हाल यो पेशामा प्रदीप रमाइरहेका छन् । समयक्रम अनुसार अगाडि बढिरहेका छन् ।
शब्द : एकराज सुवेदी/तस्बिरहरु :नवु वाग्ले
पल्सर १२५ नियोन र होन्डा साइन एसपीमा कुन दमदार ? हेरौ तथ्य
अमेरिकी सडक दुर्घटनामा नेपाली युवा बैज्ञानिकको मृत्यु
काठमाडौं – अमेरिकामा भएको सवारी दुर्घटनामा नेपाली युवाको ज्यान गएको छ । शुक्रबार...